HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo kula dagaalameysa West Ham United saxiixa xiddiga Fulham Fabio Carvalho.
January 18, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa la dagaalami doonta West Ham United isku day ay ku dooneyso saxiixa xiddiga Fulham Fabio Carvalho.
19-sano jirkaan ayaa haatan loo baahan yahay ka dib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah qeybtii hore ee xilli ciyaareedka ee Championship, halkaasoo uu u ciyaaray 15 jeer oo uu dhaliyay shan gool.
Sida laga soo xigtay The Sun , Liverpool ayaa ka fiirsaneysa inay dalab 5 milyan ginni ah ka gudbiso Carvalho bishaan, halka Hammers ay sidoo kale xiiseyneyso saxiixiisa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli jirta xiisad u dhaxeysa Reds iyo Fulham oo ku aadan saxiixa Harvey Elliot , taasoo qeyb ka qaadan karta arrintan, halka Leeds United iyo Porto ay sidoo kale isha ku hayaan xaalada.
Carvalho ayaa qandaraaskiisa kooxda Championship uu dhacayaa xagaaga, iyadoo lix bilood oo kaliya ay ka harsan tahay qandaraaskiisa, sidaas darteed lacag magdhow ah ayaa lagu xaqiijin karaa heshiiska.